Iran oo ka digtay hubka laga iibiyo dalalka Khaleejka – Bandhiga
Iran oo ka digtay hubka laga iibiyo dalalka Khaleejka
Wasiirka arimaha dibeda Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa waxuu ka digay tartanka hubka ee ka jira Bariga Dhaxe, waxaana uu sheegay in hubka Mareykanka uu ka iibiinayo dalalka bariga dhexe ay ka dhigtay gacanka Khaliijka mid halis Ah.
Wareysi uu siiyay isniinta maanta ah Tv-ga caalamiga ee Al Jazeera ayaa tilmaamay in doomaha wada hubka ee ku qulqulaya gacanka Khaliijka ay keeni doonaan xasilooni Darro.
Wuxuu tilmaamay in sanadkii la soo dhaafay Mareykanka uu dalalka gobolka ka Iibiyay hub qiimihiisu dhan yahay $50 Billion oo dalalka qaar ee gatay sadex u dhig uu hubkaan ka badan yahay dadka ku Nool.
Mr Zarif ayaa sheegay in Iiraan oo dadkeeda lagu qiyaaso 1 million ay ku qarash gareysay dhanka milatariga lacag dhan 16 billon$ halka boqortooyada Sacuudiga ay isticmaashay 87 Billion $.
Imaaraadka oo bahwadaag la ah Sacuudiga qilaaf xooganna uu kala dhaxeeyo Iiraan ayaa iyadana miisaaniyada milatariga ee sanadkii hore adeegsatay uu ahaa 22 billon iyadoo dadkeeda ay yihiin hal million oo Ruux.
Hadalka wasiirka arimaha dibada Iiraan ayaa ku soo aadaya iyadoo Mareykanka uu shaaciyay in wadamada carbeed uu kala shaqeyn doono sidii lagu ilaalin lahaa doomaha ganacsi ee maraya gacan biyoodka Carabta.